Kylian Mbappe oo xafladii abaalmarintada horyaalka faransiiska ee xalay si dadban uga farxad galiyay jamaahiirta Real Madrid – Sabab? – Gool FM
Kylian Mbappe oo xafladii abaalmarintada horyaalka faransiiska ee xalay si dadban uga farxad galiyay jamaahiirta Real Madrid – Sabab?
(Paris) 20 Maajo 2019. Weeraryahanka da’da yar ee Paris Saint Germain Kylain Mbappe ayaa xalay kasoo muuqday xafladda lagu bixinayay abaalmarinada horyaalka League 1, isagoo hor fadhiya tababarahiisa Thomas Tunchel ayuuna soo jeediyay iney suuragal tahay ka bixitaankiisa kooxda ka dhisan Paris.
Xiddiga reer France ayaa la gudoonsiiyay abaalmarinta xiddiga ugu fiican horyaalka kadib markii uu qaatay fasal ciyaareed aad u fiican, 38-gool ayuu dhaliyay kadib 42-kulan uu kooxda u saftay.
Waxey u muuqatay in Kylian Mbappe uu wali ka niyad jabsan yahay natiijadii ay kooxdiisa kala kulantay Manchester United, wuxuuna ka dhawaajiyay inuu u dhaqaaqayo haduu qorshe cusub hadii uu fursad u helo.
“Dabcan waxaan wajahnay niyad jab badan fasalkaan, balse taasi waxey qeyb ka tahay kubadda cagta” ayuu yiri Kylian Mbappe oo masraxa uu la taagnaa halyeeyga Chelsea Dider Drogba.
“Waqtigan waa mid aad muhiim iigu ah, waxaan imid iyadoo ay halkaan tahay talaabadii koowad ama labaad ee waayaheyga kubadda cagta”
“Wax badan ayaan halkaan ka bartay, waxaana dareemayaa iney suuragal tahay in la joogo waqtigii aan masuuliyad badan xambaari lahaa”
“Laga yaabee Paris Saint Germain, taasoo i siisay farxad weyn, ama meel kale oo aan ka helo qorshe cusub”
Erayadaas waxey ahaayeen mid ay la yaabeen daawadayaashii xafladdii xalay, sidoo kale tababare Tunchel ayey ku noqotay arrin layaab leh maadaama xiddiga uu maanka ku hayo qorshe uu kooxda kaga tago.
Xiddiga ku guuleystay koobka Adduunka waxaa si weyn loola xiriirinayaa Real Madrid, maadaama uu taageero weyn u yahay Zidane – sidoo kalana uu mar walba taageero khaas ah u ahaa kooxda Los Blancos.
Jamaahiirta kooxda boqortooyada ayaana farxad ku dareemaya warka kasoo yeeray xiddigaan, inkastoo ay macquul tahay inuu meel kale aado hadii uu go’aansado inuu ka baxo Parc des Princess.
Roy Keane oo si aan caadi ahayn u weeraray qaar ka mid ah xiddigaha Manchester United
SUUQA: Kooxda Lille oo go'aan ka gaartay mustaqbalka xiddigooda ay ku raad joogaan kooxaha Man United & Arsenal.
Amka mohamed amka says:
Mpabbe war iska imow madrid
An ku cil baxne barca iyo odeyga